Accueil > Gazetin'ny nosy > Hery Rajaonarimampianina: Filoha halam-bahoaka indrindra
Hery Rajaonarimampianina: Filoha halam-bahoaka indrindra
Araka ny fampahafantarana nataon’ny teo anivon’ny fiadidiana ny repoblika sy ny dokam-barotra mandeha amin’ireo haino aman-jerim-panjakana, dia amin’ity androany ity, manomboka amin’ny 5 ora hariva, no hiresaka mivantana amin’ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina. Resaka izay hitondrany fanazavana, na koa hamelabelarany ny heviny mikasika ny fampandrosoana eritreretiny ho atao eto Madagasikara. Io fotoana io ihany koa no entina hanamarihana ny faha efa-taona nitondran’i Hery Rajaonarimampianina ny firenena. Tsara marihana fa tao anatin’ny efa-taona, sambany vao nanamarika ny tsingerin-taona nandraisany fahefana i Rajaonarimampianina. Eo amin’ny resaka pôlitika moa dia tsy misy zavatra mandehandeha ho azy izany fa tsy maintsy misy tanjona ny zava-drehetra atao. Efa manakaiky ny fifidianana filoham-pirenena ka efa samy mihetsiketsika mafy daholo ireo fantatra fa hilatsaka kandida, anisan’izany ny filoha am-perinasa izay manana tombony indrindra satria afaka mampiasa ny fahefana eo am-pelatanany, ary afaka ihany koa mampiasa ho fitaovana ny haino aman-jerim-panjakana amin’ny serasera ataony. Na mbola tsy tontosa aza izany resaka ho ataon’i Hery Rajaonarimampianina miainga avy eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha izany, efa azo antoka sahady fa karazana fampielezan-kevitra no ho ataon’ny filoha amin’io fotoana io. Tsy maintsy hidoka tena amin’ireo zava-bita izay tsy hita loatra aloha hatreto izay tena fiantraikany amin’ny fiainan’ny Malagasy isan-tokantrano, ary handresy lahatra an-kolaka ny vahoaka mba hametraka fitokisana aminy ka hanome azy fe-potoam-piasana vaovao amin’ny alalan’ny fifidianana. Efa tara loatra anefa raha amin’izao herintaona latsaka mialohan’ny fifidianana izao no hiezaka haka ny fon’ny Malagasy i Hery Rajaonarimampianina. Voalohany aloha, tsy nisy ny zavatra goavana tena nisongadina na zava-dehibe nampiova ny fiainam-bahoaka tao anatin’izay 4 taona nitantanany ny firenena izay. Azo heverina fa zava-dehibe ny nandraisan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny frankôfônia, tamin’ny novambra 2016, saingy tsy nisy vokatra mivantana tamin’ny vahoaka malagasy izany. Vao mainka niha nahantra sy nitotongana ny firenena malagasy fa tsy araka ny resaka nation-dRajaonarimampianina teny Iavoloha, tamin’ny fifampiarahabana nahatratra ny taom-baovao, fa hoe efa ny 70 isan-jaton’ny Malagasy amin’izao ankehitriny izao no miaina ao anatin’ny fahatrana fa tsy 92 isan-jato toa izay nisy tamin’ny fotoana nandraisany ny fahefana, tamin’ny 25 janoary 2014. Porofon’izany ny fitomboan’ny isan’ireo tsy manan-kialofana, ireo tsy an’asa izay voatery mandeha mivarotra eny amoron-dalana, ireo lasa manao asan-jiolahy ary ireo tsy mahita vahaolana afa-tsy ny fivarotan-tena mba ahafahana mivelona.
Sarotra ny hinoana fa mbola ho azon-dRajaonarimampianina ny fon’ny Malagasy tao aorian’ny fampanantenana maro nataony kanefa zara raha misy tanteraka: Fanafoanana ny delestazy ao anatin’ny 3 volana, fanaovana laharam-pahamehana ny ady amin’ny kolikoly sy ny fanondranana antsokosoko an’ireo harena voajanahary, sns sns. Ny vidim-piainana tsy nitsahatra nisondrotra tao anatin’ny efa-taona, ny fiainam-piaraha-monina nihapotika, ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy moa iny efa tsy resahina intsony, na ny amin’ny tontolo ambanivohitra na ny aty amin’ny tanàn-dehibe. Eto Madagasikara moa tsy mba misy ny fanadihadiana na “sondage” atao amin’ny vahoaka, tahaka izay misy any amin’ireny firenena mandroso ireny, satria raha misy eto amintsika izany dia hinoana fa ny ampahany vitsy amin’ny Malagasy sisa no mbola mankasitraka ny fitondran’i Hery Rajaonarimampianina, amin’izao fotoana. Tsy ilàna atontan’isa na fanadihadiana lalina no hamantarana izany fa mihaino fotsiny ny resaka ataon’ny olom-pirenena eny anivon’ny fiaraha-monina rehetra eny. Tsy ampisalasalana mihitsy ny ilazàna fa tamin’ireo filoham-pirenena rehetra nifandimby nitondra ity Madagasikara ity, tao anatin’ireo repoblika 4 nifanesy, dia i Hery Rajaonarimampianina no halam-bahoaka indrindra. Tsy mahagaga raha teo izany satria mialohan’ny fifidianana tamin’ny 2013, tsy nahalala an’izany Hery Rajaonarimampianina izany ny ankamaroan’ny Malagasy fa izy efa nilatsaka kandida vao nanomboka fantatra ny vahoaka. Tsy ilaina intsony angamba ny mampahatsiahy fa tsy tahaka ny zava-misy any amin’ireny firenena demôkratika ireny no nahatongavany teo amin’ny fahefana fa tonga tsy nampoizina na “président par accident” hoy ny Frantsay.